Farihy Titicaca: toetra, fiaviana ary toetrandro | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 14/01/2022 10:00 | Ciencia
El Farihy Titicaca manana rano midadasika izay mandrakotra ny faritanin'i Peroa sy Bolivia izy io, ary voatanisa ho farihy avo indrindra eran-tany koa izy, manana rano azo fitetezana, mety ho an'ny jono, ary misy nosy mitsingevana naorina eo amboniny, izay misy dia fiaraha-monina feno. Antsoina koa hoe Ranomasin'i Andes izy io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Farihin'i Titicaca, ny niaviany sy ny toetrany.
2 Ny niavian'ny Farihy Titicaca
3 Toetran'ny Farihy Titicaca
Ny Farihy Titicaca dia iray amin'ireo farihy manaitra indrindra eran-tany ary 3.812 XNUMX metatra ny haavony. Noho ny maha-tokana ny toerana ara-jeografika azy, dia manana ny mampiavaka azy ireo firenena roa any Amerika Afovoany, izay ananany. 56% amin'ny zom-pirenena Peroviana ary 44% amin'ny zom-pirenena Boliviana.
Tsy tapitra hatreo anefa ny toetrany, satria raha ampitahaina amin’ireo farihy hafa any amin’ny faritr’i Amerika Latina ny fanitarana ny 8.560 204 kilometatra toradroa, dia ny Farihy Titicaca no farihy faharoa lehibe indrindra amin’io faritany midadasika io. Mirefy 1.125 kilometatra avy eo ny refy, ary morontsiraka mirefy XNUMX XNUMX kilometatra no manamorona ny velarany, izay mahatonga azy io ho farihy avo indrindra sy azo ivezivezena indrindra eran-tany.
Ankoatra izany, ity farihy tsara tarehy ity dia manana nosy mihoatra ny 42 ao anatiny, ny malaza indrindra amin'izy ireo dia ny Isla del Sol, izay manan-danja kokoa noho ny hafa satria ny Empira Inca no niandohan'ny tao, ka mampiseho andiana vakoka fa anisan'izany izy ireo. sivilizasiona fahiny porofo ny fisiany. Amin'izao fotoana izao, teratany ny ankamaroany ny mponina ao aminy, ary na dia misy fiantraikany amin'ny fomba amam-panao maoderina aza izy ireo, mitazona ny ankamaroan'ny fomban-drazany taranak'i Inca.
Ny niavian'ny Farihy Titicaca
Ny herin'ny tectonic dia avy amin'ny magmà eto an-tany, ary io angovo geothermal io dia avadika ho angovo mekanika izay mahatonga ny fihetsehan'ny takelaka ambanin'ny tany mandrafitra ny kaontinantantsika. Ny niandohan'ny Farihy Titicaca dia noho ireo hery tectonic ireo izay mampiakatra ny tendrombohitra atsinanana sy andrefana amin'ny Andes any Amerika Afovoany. Ny herin'ity hetsika ity dia miteraka ny fiforonan'ny lembalemba, izay avo lenta fisaka. Io lemaka io dia fantatra amin'ny anarana hoe Meseta de Collao.
Ny Plateau Collao, any amin'ny haavon'ny 3.000 metatra mahery, nitazona ny rano mangatsiaka nandritra ny vanim-potoanan'ny ranomandry, ka tsy nisy ny fizotry ny déposition. Namela azy io hihazona ny bikany sy ny halaliny izany, ka rehefa nitranga ny vanim-potoana interglacial, dia nitsonika ny ranomandry ka lasa Farihin’i Titicaca, izay antsoina ankehitriny hoe Farihy Titicaca.
Misy fiantraikany amin'ny tatatrany kely sy miadana ihany koa ny toetr'andro semi-maina sy maina ao amin'ny dobo afovoan'ny caudal ao Però sy Bolivia, ka manampy amin'ny faharetan'ity rano midadasika ity.
Ny fandinihana lalina momba ny rafitra farihy lembalemba dia nampiseho fa ny Farihin'i Titicaca dia vokatry ny fivoaran'ny rafitra tena tranainy izay nanomboka tamin'ny vanim-potoan'ny Pleistocene tany am-boalohany, 25,58 hatramin'ny 781,000 taona lasa izay, ary nifindra tany amin'ny faran'ny Pliocene.
Ny fiovan'ny toetr'andro nitranga nandritra ireo vanim-potoana ireo, manomboka amin'ny toetr'andro somary mafana ka hatramin'ny toetr'andro mangatsiaka sy mando, dia nisy fiantraikany mivantana tamin'ny fisian'ny Farihy Titicaca sy ny farihy lembalemba hafa. Amin'ny tranga mitovy amin'izany, ny tampon'ny Cordillera dia vaky noho ny hery tektonika avaratra-atsimo. Farany, tao amin'ny Pleistocene Ambany 2,9 tapitrisa taona lasa izay, Taorian'ny niandohan'ny Farihy Cabana sy talohan'ny nisian'ny Farihin'i Baliwan, dia nisy hady tektonika niforona izay honenan'ny Farihy Titicaca mijoalajoala.
Toetran'ny Farihy Titicaca
Miankina amin’ny haavony ny toetrandron’ny Farihy Titicaca, satria farihy maherin’ny 3.000 25 metatra ambonin’ny haabon’ny ranomasina izy io, ary misy fahasamihafana lehibe eo amin’ny hafanan’ny andro sy ny alina. Mety hahatratra 0°C ny maripana amin’ny antoandro ary XNUMX°C amin’ny alina.
Ny mari-pana isan-taona amin'ny farihy dia voafaritra ho 13°C. Amin'ny lafiny iray, miovaova eo anelanelan'ny 11 ka hatramin'ny 25 degre Celsius ny hafanan'ny rano amin'ny volana aogositra ary eo anelanelan'ny 14 ka hatramin'ny 35 degre Celsius amin'ny volana martsa.
Mety ho hafahafa ihany koa fa rehefa eo amin’io haavo io dia mafana be ny maripana mandritra ny andro, ary izany dia satria ny Farihy Titicaca dia afaka mandrindra ny mari-pana satria mitroka ny angovo azo avy amin’ny masoandro mandritra ny andro, izay any amin’ny faritra manodidina ny farihy. Amin'ny alina dia taratra io angovo io, ka tsy mangatsiaka araka ny nantenainay ny maripana.
Ny ankamaroan'ny rano ao amin'ny Farihy Titicaca dia very noho ny etona, tranga iray izay mafimafy kokoa any amin'ny faritra sasany misy sira, satria ny mineraly ao amin'ilay farihy dia ampidirina ao anaty renirano ary apetraka.
Tombanana fa ny 5%-n’ny rano ao amin’ny farihy ihany no mivoaka ao anaty renirano Desaguadero mandritra ny vanim-potoanan'ny rano be, izay mivarina any amin'ny Farihy Poopó, izay masira kokoa noho ny Farihy Titicaca. Ny rano mikoriana avy amin'ny Farihin'i Titicaca no tena miafara any amin'ny Salar de Coipasa, izay lasa etona haingana ny rano kely.
Ny mampiavaka azy koa dia ny hoe fohy dia fohy ny renirano mandrafitra ny dobo hydrologique-ny, ka ny reniranon'i Ramis, Asangaro ary Calabaya no tena lehibe sy lava indrindra, ka ny Ramis no lava indrindra amin'ny 283 km.
Iva sy tsy ara-dalàna ny fikorianan’ny sakeli-drano ary ny rotsak’orana isan-taona no ahafantarana ny fandraisan’anjaran’izy ireo, izay eo anelanelan’ny volana desambra sy martsa, raha eo anelanelan’ny volana jona sy novambra kosa ny haintany na tsy fisian’ny orana.
Ny sakeli-dranon'ny Farihy Titicaca dia miavaka amin'ny fisondrotana kely, ka izany no mahatonga ny fihetsik'izy ireo mihodinkodina, izany hoe, sinusous, izay midika fa tsy misy korontana, misy fiantraikany amin'ny mangarahara, ny karazana biby sy zavamaniry mifandray amin'ny rafitra. .
Ny rano ao amin'ny Farihin'i Titicaca dia miavaka amin'ny maha-bevohoka azy ary tsy misy fomba fiasa hamaritana, hifehezana ary hanaraha-maso ny kalitaon'ny rano. Raha ny marina, manokana ny santionany natao, izany hoe, betsaka amin’ny velaran’ilay farihy no tsy voadinika momba izany. Na izany aza, fantatra fa maloto ny rano ao amin'ny Helodranon'i Puno amin'izao fotoana izao satria ny rano maloto ao an-tanàna dia ariana tsy misy fitsaboana.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Farihy Titicaca sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Ciencia » Lake Titicaca
Voamarika tany Espaina ny fipoahan’ny volkano Hunga Tonga